Koox ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo wadda wadahadallo ay kula soo saxiixanayso xiddiga Barca ee Ivan Rakitic – Gool FM
Koox ka dhisan horyaalka Ingiriiska oo wadda wadahadallo ay kula soo saxiixanayso xiddiga Barca ee Ivan Rakitic
(Barcelona) 26 Abril 2020. Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay tahay kooxdii ugu dambeysay ee diiwaangashata xiisaheeda ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona, Ivan Rakitic.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia ayaa la la xiriirinayaa inuu ka tagayo garoonka Camp Nou kaddib markii uu hoos uga dhacay heerka sare xilli ciyaareedkan.
Tababare Quique Setien ayaa daaha ka qaaday isbuucii hore in Rakitic uusan wali dalban inuu baxo, laakiin kooxo badan oo waa weyn ayaa la rumeysan yahay inay miisaamayaan u dhaqaaqista laacibkan.
Sida laga soo xigtay Majaladda Mundo Deportivo, Tottenham ayaa haatan wadda qorshe ay kula soo saxiixaneyso 32-sano jirkaan, iyadoo Jose Mourinho uu doonayo inuu xoojiyo khadkiisa dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, Kooxda Tottenham ayaa la filayaa inay tartan ku aaddan Rakitic kala kulmaan kooxaha Atletico Madrid, Juventus, Sevilla iyo sidoo kale kooxda ay xafiiltamaan ee Manchester United.
"Waxaan casharro ku saabsan sida loo sii fiicnaado ka qaadanayaa Ronaldo inta lagu jiro Karaantiilka" – Xiddig ka tirsan Man Utd